कसले चलायो ह्वाइट हाउस बाहिर गोली ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
कसले चलायो ह्वाइट हाउस बाहिर गोली ?
प्रकाशित मिति : २०७७, २७ श्रावण मंगलवार ०९:२१
एउटा पत्रकार सम्मेलन अचानक छाडेलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउस बाहिर कसैलाई गोली हानिएको बताएका छन् । उनले ह्वाइट हाउसमै सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनको बीचमै उनका सुरक्षाकर्मीले उनलाई केही जानकारी दिएपछि ट्रम्प पत्रकार सम्मेलन छाडेर भित्र गएका थिए । तर भित्र गएर आएपछि उनले उक्त सम्मेलन जारी राखे र भने, “स्थिति नियन्त्रणमा छ।“ उनले पत्रकारहरूसँग आफूलाई अमेरिकी सिक्रेट सर्भिसका मानिसहरूले कुनै हतियारधारी सन्दिग्धलाई गोली हानेको जस्तो लागेको बताए ।
उनका अनुसार उक्त घटनापछि कसैलाई अस्पताल लगिएको छ । ट्रम्पले यो असामान्य स्थिति भए पनि सिक्रेट सर्भिसको व्यावसायिक ढङ्गले गर्ने कामको प्रशंसा गरे । पत्रकार सम्मेलन छाडेको नौ मिनेटपछि ट्रम्प पुनस् सम्मेलनस्थल फर्केका थिए ।
उक्त घटना उनीप्रति लक्षित भए वा नभएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको ट्रम्पले बताए । अमेरिकी सिक्रेट सर्भिसले पनि एक अधिकारी उक्त घटनामा सामेल भएको र कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरू घटनास्थलमा हेरेको जनाएको छ ।